« prev 1 … 905 906 907 908 909 … 913 next »
Xildhibaanno lagu muransanaa oo go'aan laga gaaray
Sagal Radio Services • News Report • September 9, 2012
Guddigii loo xil saaray go'aan ka gaaridda xubnihii baarlamaanka ka mid noqoshadooda muranka la galiyay, ka dib markii guddigii farsamada u qaabilsanaa odayaashii soo xulyay xubnaha baarlamaanka ay sheegeen in ay dadkaasi yihiin kuwa ku eedeysan dambi dagaalnimo.
Audio • September 9, 2012
Madaxweyne Shariif iyo Guddoomiye Jawaari oo shiray
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Md. Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka Md. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa xalay kulan ku yeeshay hoyga guddoomiyaha baarlamaanka ee Muqdisho.
Guddoomiyihii Majmaca Culimada Soomaaliyeed oo dhintay
Sagal Radio Services • News Report • September 8, 2012
ALLAHA u naxariistee waxa magaalada Muqdisho maanta lagu aasay guddoomiyihii majmaca culimada Soomaaliyeed Sheekh Axmed Cabdi Dhicisoow, oo xalay Muqdisho ku dhintay.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo Warshiikh la wareegay
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM, ayaa saaka la wareegay degmada Warshiikh ee gobalka Shabellaha Dhexe.
Warka Radio Sagal iyo Barnaamijkii dhacdooyinka
Sagal Radio Services • Audio/News Report • September 8, 2012
Wararka waxa ka mid ah, Ololaha doorashada madaxtinnimo ee dalka oo meel xasaasi ah maraya, Musharixiin baarlamaanka hortagay, Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo Warshiikh la wareegay iyo qodobo kale.
Uvutaji Sigara ni Hatari kwa Maisha
News Feature • September 6, 2012